मृगौलासम्बन्धी सल्यचिकित्साको क्षेत्रमा नेपालको असाधारण प्रगतिः प्रम ओली — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > मृगौलासम्बन्धी सल्यचिकित्साको क्षेत्रमा नेपालको असाधारण प्रगतिः प्रम ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले मृगौलासम्बन्धी सल्यचिकित्साको क्षेत्रमा असाधारण र नमुनायोग्य प्रगति गरेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा सुरु भएको नेपाल युरोलोजिकल सल्य चिकित्सक संघको छैठौं वार्षिक हाइब्रिड सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो ।
‘मैले एक वर्षअघि मात्र स्वदेशमै दोस्रो प्रत्यारोपण गरेको थिएँ । म विल्कुल स्वस्थ्य छु र प्रधानमन्त्रीको जस्तो गहन जिम्मेवारी सम्हाली रहेको छु,’ उहाँको भनाई थियो । प्रत्यारोपण पछिका १३ महिना आफू विना कुनै स्वास्थ्य समस्या काम गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आफू सँगै दुवै पटकका मृगौलादाताहरु समेत स्वस्थ्य र सक्रीय रहेको बताउनुभयो ।
सल्यचिकित्सा करिब २६ सय वर्षअघि ऋषि श्रुषुतले नेपालमै विकास गरेको प्रशंग उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसपछि लामो समय अन्तरमा १३ वर्ष अघि फेरि नेपालमा आएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । सन् १९०२ को असफल प्रयासबाट सुरु भएको मृगौला प्रत्यारोपण १९५४ देखिको पहिलो सफलता र त्यसपछि क्रमशः प्रगति भइरहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पहिलो पटक आफ्नो मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा देशमा त्यो सुविधा नभएका कारण भारतमा गर्नुपरेका स्मरण गर्दै उहाँले १३ वर्षपछि सुविधा पाएकै कारण नेपालमा सल्यक्रिया गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले पहिलो मृगौला प्रत्यारोपण गरेको १३ वर्षमा ठूला उपलब्धीहरु हासिल गरेको समेत प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । सार्क तथा विश्वका अन्य क्षेत्रका चिकित्सक हरुको अनुभव आदान प्रदानले यस क्षेत्रमा थप प्रगतिको बाटो खोलेको बिचार उहाँको थियो ।
२०७८ वैशाख ४ गते १२:३२ मा प्रकाशित
तपाईसँग कुनको सेयर छ ? फाईनान्स र बैंकले दिंदैछन् ३२% र ३०% बोनस !
नागरिक लगानीकोष पनि सेयर बजारमा आउँदै, तयारी लगभग पूरा !
प्रभु बैंकले घोषणा गर्यो लाभांश, बोनस र नगद कति ?
स्थानीय तहका लागि संचालित विभिन्न तहको लिखित नतिजा सार्वजनिक, को–को भए उत्तीर्ण ?